Khabar Kantipur » बिरामीलाई निःशुल्क अक्सिजन जुटाइदिने युवाविरुद्ध अस्पतालले मुद्दा हाल्यो….
बिरामीलाई निःशुल्क अक्सिजन जुटाइदिने युवाविरुद्ध अस्पतालले मुद्दा हाल्यो….
काठमाडौं। कोरोनाभाइरसले विश्वमै सबैभन्दा धेरै दयनीय अवस्थामा पुगेको भारतमा बिरामीलाई निःशुल्क अक्सिजन उपलब्ध गराउने एक युवाले कानुनी मुद्दा खेप्नुपर्ने भएको छ ।
ती युवाविरुद्ध अस्पतालले मुद्दा हालेको छ र जिल्ला प्रशासनले थप कारवाही अगाडि बढाएको छ । भारतीय मिडियाका अनुसार घटना उत्तर प्रदेशको जौनपुरको हो । जौनपुर जिल्ला प्रशासनमा बिरामीलाई निःशुल्क अक्सिजन उपलब्ध गराउने युवा विक्की अग्रहरीमाथि महामारी अधिनियम समेत कैयौं धारामा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
बिरामीले अक्सिजन नपाएर तड्पिरहेको र एक युवाले ती बिरामीलाई अक्सिजन जुटाइदिएको खबर मिडियामा भाइरल भएपछि स्वास्थ्य विभाग र जिल्ला प्रशासन ब्याकफुटमा आएका हुन् ।
प्रशासनले अब यो विषयमा जाँच गरिने बताइरहेको छ । उत्तर प्रदेशको जौनपुर जिल्ला अस्पतालबाहिर अक्सिजनको अभावका कारण तड्पिरहेका बिरामीको लागि विक्की अग्रहरी देवदूत बनेर आएका थिए । विक्कले २९ अप्रिलका दिन अक्सिजनको अभाव भएका बिरामीलाई आफ्नो तर्फबाट अक्सिजन उपलब्ध गराएका थिए ।
उनले जिल्ला अस्पतालमा २५ देखि ३० बिरामीलाई अक्सिजन उपलब्ध गराइसकेका छन् । तर, जिल्ला अस्पतालका सीएमएसको उजुरीपछि प्रशासनले विक्कीविरुद्ध महामारी अधिनियम ३, आइपीसी धारा १८८ र २६९ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको छ । सीएमएसका डाक्टर अनिल शर्माले मिडियालाई बताएअनुसार विक्की र उनका साथीहरु बिरामीलाई अक्सिजन दिनको लागि अधिकृत थिएनन् र उनीहरुसँग कुनै डिग्री छैन ।
उनले विक्की र उनका साथीहरुले यसरी अक्सिजन बाँड्नु अस्पतालको छवि खराब गर्ने प्रयास भएको दावी गरे । आफू अक्सिजन दिनको लागि अधिकृत पनि नभएको र आफूसँग डिग्री पनि नभएको अवस्थामा अक्सिजन दिनु बिरामीसँग खेलवाड गर्नु भएको उनले दावी गरे । पुलिस चौकी इन्चार्ज तारावती यादवले मुद्दा दर्ता भएको र जाँच भइरहेको बताएकी छिन् ।